ရေခဲပြင်ထဲမှာပွင့်တဲ့ပန်း _ ခွန်မြလှိုင်: ပွေလီမနဲ့ အတိတ်သင်္ကြန်
သင်္ကြန်တစ်ခေါက် ကျရောက်ပြန်ပြီ။ အသက်အရွယ်အရ ရော၊ အိမ်ထောင့်တာဝန်တို့ကြောင့်ပါ သင်္ကြန်ကို အရင်လို မနွှဲနိုင်တော့ပေမယ့် သက်ထား အဖို့တော့ အမှတ်တရ လွမ်းစရာတွေက များလှပါသည်။ အထူး သဖြင့်တော့ သူငယ်ချင်း ပွေလီမကို သူငယ်ချင်းများ အားလုံးက အလွမ်းဆုံး ဖြစ်မည် ထင်သည်။ သင်္ကြန် ဆိုရင် ပွေလီမ ကို မဏ္ဍပ်ထိုင်ဖို့ ခေါ်သူတွေက အများသား။ မူရင်းနာမည် လှလှလေး ပျောက်ကာ နာမည် ပြောင် ရလောက်အောင် ပွေပွေ လီလီ စဉ်းစားတတ် သောကြောင့် သူငယ်ချင်းများက သူမ ပါမှ ပွဲစည်သည် ဟုပင် ပြောစမှတ် ပြုကြလေသည်။ ပွေလီမကို ပထမဆုံး သိကျွမ်းခဲ့ရသည်က တက္ကသိုလ်က အဆောင်မှာ…
"အဆောင်မှာ ဟင်း ချက်မစားရဘူး ဆိုပြီး ကန့်သတ်ပေမယ့် ထမင်းကျ rice cooker တလုံး သွင်းခွင့် ပေးတယ် နော် ဘာကြီးမှန်းလည်း မသိဘူး "
"အပြင်က ဟင်းဝယ်ပြီး ထမင်းတော့ အနံ့ မထွက်လို့ ချက်စားချင် စားလို့ ဆိုလိုတာ နေမှာပေါ့ဟ"
"ခုချိန်က အဆောင် ပိတ်ပြီလေ။ အပြင်မှ ထွက်လို့ မရတော့တာ.. ဗိုက်ဆာလိုက်တာဟာ.. အခြောက် အခြမ်း လေးတွေ ကလဲ ကုန်နေပီ"
"ဟင်.. ဟိုတလောကမှ နင့်အိမ်က ပို့တဲ့ ငါးခြောက်ကြော်က ကုန်ပလား"
"ကြက်ဥ အစိမ်းတွေ.. "
"အွန့်.. ခဏနေပါဦး ငါအကြံအဖန် လုပ်ပါဦးမယ်"
"ဘာလဲ ထမင်းချက်တဲ့အထဲ ကြက်ဥ ရေဆေးပြီး ထည့်ရင် ကြက်ဥပြုတ် ရတာတော့ လာမပြောနဲ့နော်.. ငါ ကြက်ဥပြုတ်ကို မုန်းနေပြီ"
"အေးပါ.. ငါက ကြက်ဥပြုတ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကြက်ဥကြော်ဆိုရင် စားမလား။ ကြက်ဥ အော်န်မလိတ်နော်.. "
"အင်း စားချင်သားးး ဒါပေမယ့် ဘယ်မလဲ ဒယ်အိုးနဲ့ မီးဖို… ပြီးတော့ အနံ့ထွက်ရင် တိုင်မယ့်လူနဲ့ အဆောင်မှူး ကို ထည့်တွက်ရဦးမယ်"
ပြောပြောဆိုဆို စတီးပန်းကန်ပြားထဲ ဆီထည့်။ ကြက်ဥကို ပန်းကန်လုံးထဲ ဖောက်ပြီး နာနာခေါက်၊ ခရမ်းချဉ်သီး တစ်လုံး အတုံးသေးသေး ဖြစ်အောင် လှီး၊ ကြက်သွန်နီဥကြီး တစ်လုံးကို ခပ်ကြီးကြီးစိတ်၊ ကြက်ဥခေါက်ထားတဲ့ ပန်းကန်ထဲထည့်၊ ဆားနဲ့ အချိုမှုန့် ထပ်ထည့်ပြီး ထပ်မွှေ… နောက်က လိုက်ကြည့်နေသော သက်ထားက ဒယ်အိုးနဲ့ မီးဖို ကိစ္စကို မေးချင်ပေမယ့် မမေးရဲ။ သူမရဲ့ ဟင်းချက်နည်း အတိုင်း စိတ်တိုင်းကျ သောအခါ ဆီ ထည့် ထားသော စတီးပန်းကန်ပြားထဲ ကြက်ဥ အော်န်မလိတ် လုပ်မယ့် အဆာပလာတွေ ၀ိုင်းနေအောင် လောင်း ချ လိုက်သည်။ ပြီးတော့ စတီး ပန်းကန်လုံး တစ်လုံးကို ပန်းကန်ပြားပေါ် မှောက်အုပ် လိုက် လေသည်။ ပြီးတော့.. ကုတင်ပေါ်မှာ စောင်တွေကို သပ်သပ်ရပ်ရပ် ခွေချပြီး လျှပ်စစ် မီးပူကို ကောက်ကိုင်ရင်း ကြုံးဝါး လိုက်တာက
"ဟင်းး ဘာရမလဲ.. hot plat ကမှ ၀ပ်တစ်ထောင်အား။ ငါ့မီးပူက ၀ပ် ထောင့်နှစ်ရာ အား ကွ… "
မီးပူကို ပက်လက်လှန်ပြီး မီးပူပြားပေါ်တွင် စတီးပန်းကန်ပြားကို တင်ပြီးနောက်မှ မီးပူကြိုးကို ပလပ်ပေါက်တွင် အကျအန တပ်ပြီး 'ပြုံး' လိုက်လေသည်။ ထိုညက ပွေလီမရဲ့ ကြက်ဥ အော်န်မလိတ်က ကောင်းမှကောင်း။ ဒီလို နဲ့ပဲ ပွေလီမသည် သူမတို့ သူငယ်ချင်းများရဲ့ အတိုင်ပင်ခံ ဖြစ်လာတော့သည်။
"ဒီနှစ် သင်္ကြန် ထူးထူးခြားခြားလေး ဘာလုပ်ရင် ကောင်းမလဲဟေ"
"ငါ့အဒေါ်ရဲ့ စားသောက်ဆိုင်မှာ မဏ္ဍပ် ထိုးရင် ရတယ်ဟ.. သူကတော့ ကိုယ့်စရိတ်နဲ့ကိုယ် ထိုးနိုင်ရင် ထိုးတဲ့။"
"သူ့ဆိုင်နေရာက သိပ်စည်တာနော်.. ပျော်စရာကြီး။ မဏ္ဍပ်ကို ငါ့အကို အင်ဂျင်နီယာကို ဆောက်ခိုင်းရင် ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိက က ကုန်ကျစရိတ်နော်။"
"ဒါများ.. မဏ္ဍပ်ထိုင်ချင်သူတွေဆီက တစ်ရက် ဘယ်လောက် ငွေကောက်မယ်ကွာ"
ဒီလိုနဲ့ မဏ္ဍပ်ကိစ္စ အကောင်အထည်ပေါ်ပါလေပြီ။ သင်္ကြန်ကို အကျနေ့ရော အကြတ်နေ့ပါ ပြသနာ မရှိ။ မဏ္ဍပ် ထိုင်သူများ ကြောင့်ေ ရာ၊ ရေလာ ကစားသူများကြောင့်ပါ စားသောက်ဆိုင်က အထူးေ၇ာင်းကောင်း သောကြောင့် ပွေလီမရဲ့ အဒေါ်က တပြုံးပြုံး။ သင်္ကြန်တွင်း အလုပ်ဆင်းသူ စားဖိုမှူးများနဲ့ စားသောက်ဆိုင် ၀န်ထမ်းများကို အထူးလုပ်အားခ ပေးထား သောကြောင့် ၀န်ထမ်းများကလဲ တပြုံးပြုံးမို့ အစစ အဆင်ပြေ နေသည်။ ပြသနာက သင်္ကြန်အတက်နေ့မှာ စလေသည်။ ရေစက် က မီးခိုးများ ထွက်ကာ တဟွတ်ဟွတ် ချောင်းဆိုး ရင်း ရပ်သွားသည်။ သည်တော့ မဏ္ဍပ်ပေါ်က ရေပိုက်များလဲ ရေမထွက်တော့.. ဆူညံသံများက ထွက်လာပြီ။ သက်ထားတို့လဲ ခေါင်း ကြိမ်းပြီ။ ပွဲဝင်ထိန်းသူက ပွေလီမ…
"ခဏလေးနော်.. ပိုပျော်စရာ ကောင်းမှာ.. ရေခဲတွေ အရည်မပျော်သေးလို့… ရေပက်ခံတဲ့ လူတွေ မသိစေနဲ့"
တီးတိုးတီးတိုး လက်ဆင့်ကမ်းလိုက်တော့ မဏ္ဍပ်ထိုင်သူများရဲ့ ဆူညံ ဝေဖန်သံတို့ နေရာမှာ ကျေနပ်ပြုံးတို့ ဝေေ၀ဆာဆာ နေရာယူ လာသည်။ သိပ်မကြာခင်မှာ ရေခဲ ပေါင်တုံး ကြီးများ တင်ထားသော light truck ကား များက ရေကစား မဏ္ဍပ်က ရေပိုက်တွေနဲ့ ချိတ်ဆက် ထားတဲ့ စားသောက်ဆိုင် နောက်ဖေးက ရေလှောင် အုတ်ကန်ကြီး ထဲသို့ တစီးပြီး တစီး ရေခဲ ဖြည့်နေကြသည်။
"ဟဲ့.. ပွေလီမ.. ရေစက်က ဘယ်လို လုပ်မတုံး။ ပြင်ရင် ကြာမလား။ "
"ငါ့အကို သူငယ်ချင်း အိမ်မှာ ရေစုပ်စက် အကြီး တစ်လုံး ရှိတယ်။ သူတို့ တအိမ်လုံးက ရိပ်သာ ၀င်နေတော့ လောလောဆယ် အသုံး မ၀င်ဘူး။ အဲဒါကြောင့် သွားယူနေတယ်။ စက်ပြင်သမားက ပြင်နေ ချိန်မှာ အဲဒီ ရေစုပ် စက်နဲ့ အစားထိုးမှာ.. ဟဲဟဲ.. ငါတို့ကလဲ ရေပက်တာ လွန်ပါတယ်။ ရန်ကုန် မို့ပေါ့။ နယ်မှာ သာဆို အ၀ီစိ တွင်းတောင် မကဘူး မြေအောက် ရေကြောပါ ခန်းလောက်တယ်။ တနေကုန် မနားတမ်း ပက်နေ မှတော့ စက် လဲ ပူပြီပေါ့။ လောလောဆယ် မဏ္ဍပ်ပေါ်က လူတွေကို မုန့်လက်ဆောင်း ကူဝေပေး ပါဦးဟ။ နောက်တကြော့ ပေါ့။"
မဏ္ဍပ်ပေါ် တက်လိုက်တော့ အားးပါးးပါးးးးး အောက်မှာ နည်းတဲ့ လူအုပ်ကြီး မဟုတ်။ မဏ္ဍပ်ထိုင်သူတွေကို မိန်းကလေးချည့်သာ ကန့်သတ် ထားသောကြောင့် မဏ္ဍပ်အောက်က သကောင့်သား များက အသကုန် နောက်ပြောင် နေကြသည်။
ရေကုန်ပြီ ရေကုန်ပြီ.. ရှက်ပါတယ် ကရော် ကရော်
ရေပက်ချင်လို့ မဏ္ဍပ်ထိုင်.. ရေမလာတော့ ရှုံ့မဲ့ရှုံ့မဲ့
အပျိုပိန်ပိန် ရေစိမ်ထားတော့ အီကြာကွေး အီကြာကွေး.. အပျို၀၀ ရေစိမ်ထားတော့ ပေါင်မုန့်လုံး ပေါင်မုန့်လုံး
သင်္ကြန်ကျလို့ မပျော်နိုင်.. ရေမလာလို့ မှိုင်
ဒုက္ခပါပဲ… မုန့်လက်ဆောင်း ဝေနေရင်း ရေစက် မြန်မြန် ရောက်ဖို့ ဆုတောင်း နေတုန်း ရေစက် တင်ထားသော ဟိုင်းလတ် တစီး ခြံဝင်း ထဲ ၀င်လာသည်ကို လှမ်းမြင်လိုက်တော့မှ သက်ပြင်းချမိသည်။ မုန့်လက်ဆောင်း စား လို့ ကုန်တာနဲ့ ရေပြန် လွှတ်မည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းဖြန့် လိုက်တော့ အပျိုချောတွေ ပျော်သွားကြသည်။ မဏ္ဍပ်အောက်က လမ်းပေါ်မှာတော့ ကားများက ကြပ်ခဲလို့။ ရေမလာတဲ့ မဏ္ဍပ်မို့ မြန်မြန် မောင်းသွား ကြရ မည့် အစား ကားများ ကိုပင် ရပ်ကာ နောက်ပြောင် နေကြသည့် မောင်မင်းကြီးသားများကို စိတ်ထဲက ကြိတ်ပြီး ပျော်ပျော်ကြီး သနားလိုက်သည်။
ပွေလီမရဲ့ အကိုက မိုက်ခဲရင်း မေးလိုက်သံက သင်္ကြန်သီချင်း ဖွင့်ထားတဲ့ ဆောင်းဘောက်ကြီး ထဲက ဟိန်း ထွက် လာသည်။ အားလုံး ရုတ်တရက် မှင်သက် သွားချိန်မှာ
၀မ်း.. တူး.. သရီး ((((( ဟေးးးးးးးးးးး)))))
ရေခဲရေနဲ့ ပက်သဟ… ပြေးပြေး
မဏ္ဍပ်ရှေ့မှာ ပြုံတိုး အော်ဟစ် နောက်ပြောင်နေသော လူအုပ်ကြီး ပြေးပေါက် မှားကုန်ကြသည်။ ဘာခုမှ ကြောက် ပါပြီလဲ ဆိုတဲ့ အသံ များ … ရေပိုက်ရှင် မိန်းကလေးများရဲ့ အားရ ကျေနပ်စွာ ရယ်မောသံများ ကြားမှာ မဏ္ဍပ်က စည်ကား အသက်ဝင်လို့။ ရေခဲရေကို ရေစုပ်စက်နဲ့ စုပ်ပြီး ပိုက်နဲ့ ပက်တော့ ဘယ်သူ ခံနိုင်မှာတုံး.. ရေခဲ အုတ်ကန်တကန်စာ အကုန်မှာတော့ ရိုးရိုးရေနဲ့ဆက်ပက် ရပေမယ့် မဏ္ဍပ်ထိုင်သူများ အထူးအဆန်း ပက်ရတာမို့ ကျေနပ် သွားကြ လေသည်။
ဒီလိုနဲ့ သင်္ကြန် တနှစ်စာ ပြီးခဲ့လေသည်။ သည်မဏ္ဍပ်လဲ မဏ္ဍပ်ထိုင်သူများရဲ့ အားရကျေနပ်မှုကြောင့် နောက်နှစ် များအတွက်ပါ စရန် ရလိုက်လေသည်။ အတက်နေ့ ညရောက်တော့ မဏ္ဍပ်ကို ပြန်ဖြုတ်ရင်း အသေးစိတ် စာရင်းတွေ တွက်ကြလို့
" ပွေလီမရယ်.. နင် ဥာဏ်ကောင်းပေလို့ မဟုတ်ရင် ဒီနေ့ တရက်စာ ငွေကို မဏ္ဍပ်ထိုင်သူတွေကို ပြန်လျော် ရမှာ။ ပြီးတော့ ငါတို့လဲ နာမည်ပျက်တော့မယ်။"
"အေးဆေးပါဟာ.. နင်တို့ပဲ သူ့ကို ဒီနာမည် ပေးထားတာ ဘာလဲ.. မပူစမ်းပါနဲ့။ ဒီလို ဥာဏ်မျိုးဆို သူ့ဦးနှောက်က ထွက်ပါတယ်ဟ"
သူငယ်ချင်းများက တယောက်တပေါက် ပြောနေချိန် ပွေလီမကတော့ ပြုံးပြုံးသာ..
သြော်.. လွမ်းတ ပျော်ရွှင် .. သင်္ကြန်ပင်.. ဒီအချိန်ဆို ပွေလီမ တစ်ယောက်တော့ ပွေလီ ပေါက်စ လေးများနဲ့ ဘာတွေ ထပ် ပွေလီနေမလဲလို့ တွေးရင်းနဲ့ ...
Posted by ခွန်မြလှိုင် at 10:06 PM
Your best friend ပွေလီမ hasaMaster brain and good commonsense. You have good IQ.
That right,You can manageateam work
Also you can control the wild crowd, the drinker.
One day, You will becomeahigh boss.
ညီမရေ နှစ်သစ်မှာ ချမ်းမြေ့ ပါစေ
လှိုင်ရေ… ဒီအတွေးဒီအရေးလေးတွေ မဖတ်ရတာကြာတော့ ဖတ်လို့ ကောင်းလိုက်တာ… အလွမ်းတွေနဲနဲပြေသွားသလိုပဲ… ပွေလီမက ချစ်စရာနော်… ဥာဏ်လေးကလဲ ကောင်းလိုက်တာ… ကြက်ဥကြော်ဖို့ တွေးပုံက တကယ့်creativeပါပဲ… ကျောင်းကဆိုလို့စဉ်းစားနေတာညီမရေ… အမသိတဲ့တယောက်လားလို့ လေ… ချစ်စရာမိသားစုလေးအတွက် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ဖွယ်နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေလို့ ….